Ciidanka Xoogga Dalka oo gaaray afaafka hore ee Degmada Jamaame – Radio Baidoa
By Webmaster	 On Feb 24, 2020
Ciidanka Xoogga Dalka ayaa saacadihii ugu dambeeyay gaaray afaafka hore ee Degmada Jamaame ee Gobolka Jubbada Hoose, xilli tan iyo maalintii Khamiista ay ku sii siqayeen.
Tiro yar oo ka tirsaneyd maleeshiyada Al Shabaab oo ku harsaneyd Degmada Jamaame ayaa Axadii isaga baxday Degmada Jamaame, xilli xoogooda ay baneeyeen degmadaasi maalintii Khamiista.
Ciidanka Xoogga Dalka oo gacan ka helaya Xoogaga Kumaandooska Danab iyo Ciidanka Daraawiishta Jubbaland ayaa hadda ku sugan labada daraf ee Degmada Jamaame.
Sida uu qorshuhu ahaa Ciidanka Xoogga Dalka ayaa lagu waday inay xalay gudaha u galaan Degmada Jamaame, balse ay uga baaqsadeen, sababo la xiriira suurta-galnimada miinooyin loo maleynayo inay Shabaabka ku aaseen degmadaasi.
Ciidanka oo si feejigan ku gaaray labada waddo ee gasha Degmada Jamaame ayaa waxaa suurtagal ah in ay maanta gudaha u galaan degmadaasi, waxaase dhici karta inay dib uga dhacaan la wareegisteeda.
Afhayeenka Wasaaradda Amniga Jubbaland, Cabdinuur Ibraahim Xuseen ayaa sheegay in ciidamada iska kaashanaya hawlgalkan, ay iminka ku sugan yihiin labada daraf ee Jamaame, waxa la suggaana ay tahay inay gudaha uun u galaan.
Haddii saacadaha soo socda la soo wariyo in Ciidanka Xoogga Dalka ay la wareegeen gacan ku haynta Degmada Jamaame ayaa waxay noqoneysaa markii ugu horeysay oo Al Shabaab laga saaro degmadaasi, mudadii saddexda iyo tobanka ahayd, ee ay dalka ka dagaalamayeen.
Daawo:-MW Laftagareen Oo Sameeyey Xilqaadis iyo Magacaabis
Dhageeyso,,madaweyne Qoor qoor oo bulshada deegnaada Galmudug ugu baaqey inay…
Talyaaniga ; dadka u dhintay Coronavirus oo gaartey 15,362, oo qof.
Somaliland oo sheegtay in Saddex Magaalo dad ku sugan laga baarayo Corona Virus